Sida Xusuus- Qorku Nolosha wax uga bedelo ! | Saadaal Media
Sida Xusuus- Qorku Nolosha wax uga bedelo !
Jul 28, 2019 - jawaab
Waqtigu keliya ma baddalo wajiyadeena inaga oo aan ogeyn, sidoo kale wuxuu baddalaa fikirkeena iyo sidaan wax u arkayno, isagoon nagala tashan.
La yaab maleh, inaad jeclaato, waxaad necbayd shalay oo sida muqaalka jirkeenu u koro ama isu dhimo ayey isu baddalaan fikradaheenu, waxaana sal u ah isbadalkaas xaaladaha iyo duruufaha ina soo mara, dadka aan la kulanno, goobaha aan booqano, dhacdooyinka ina soo mara, hadba heerka aan ka joogno fahanka Diinta buugta aan aqrino iyo cidda ugu badan ee aan wax ka dhageysano. Sawir lagaa qaaday 10 sano ka hor haddii aad aragto, waa laga yaaba inuu kugu dhaliyo layaab iyo xiisa gooni ah, waxaase ka xiisa badan inaad aragto 10 sano ka hor sidaad u fikireysay, halka kaliya ee aad ka ogaan kartana waa inaad aqriso xusuusqorkaagii waa hadii aad leedahaye.
Oprah winfrey soo geba-gabeysay 25 sano oo xirfaddeedii warbaahineed ah, waxay sheegtay haddiiba ay jiraan wax ay ka mahadcelineyso inuu yahay iney lahayd Xusuusqor. Waxey sheegtay in Xusuusqorkeeda ay ku qori jirtay, maalin waliba hal sadar oo sheegaya waxa maalintaas u hagaagay. Sidoo kale waxey sheegtay iney ku calaameyn jirtay waxa ugu badan ee maalintaas maskaxdeeda ku soo noq-noqonayey. Waxey dadka usoo qabatay 2012, qeyb yaroo ka mida xusuusqorkeedii. Waxey qortay qeybtaas 1996, waxeyna u qortay sidaan:
“Waxaan is weydiinayaa sababta aanan u dareemeyn farxad yar; 1996 waxaan ahay qani, waxaan hayaa masuuliyad culus, waxaan haystaa hanti farabadan, waxaan ka koray meel walba, haddana ma faraxsani. Sidee ayay ku dhici kartaa anigoo haysta fursad badan, ayna ii furan yihiin waddooyin badan oo aan ku gaari karo, wixii aan u baahdo, haddana inaan isku tiriyo dadka aan faraxsaneyn? Tolow ma mashquulka faraha badan baa? Haa, waa sidaas 1996, waa sanadkii iigu mashquulka badnaa”.
Intaas ayaa ku qornayd bog ka mid ah xusuusqorkeeda oo ay dadweynaha la wadaagtay Oprah.
Waxaa hubanti ah iney dad badan ku liibaaneen keydinta xusuustooda, gaar ahaan kuwa diiwaan geliyey fikradahooda kala duwan, ee ku saleysnaa waqtiyada kala duwan; kuwa qoray curisyada iyo hal-abuurrada ay ku fakareen waqtiyada qaar, xitaa haddii aaney suurtagalin. Maaddaama cidda aad la wadaageysaa ay tahay naftaada, oo aadan u oggolaaneyn iney cidkasta aaqrisato xusuusqorkaaga, maxaa diidaya inaad yeelato xuusqor, kuna keydiso fikradahaaga, si aad u aqriso, markaad daawaneyso Album-ka sawirradaada, sanado kadib.
Waxaa Qoray | Cabdirisaaq xasan cabdi (Jubba )